Wadiwa PyGui, Iri Nyore-Kushandisa Python GUI Sisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Anodiwa PyGui, iri nyore-kushandisa Python GUI fomati
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yaDear PyGui 1.0.0 yakaziviswa (iyo DPG), iyo yakamisikidzwa se chimiro chemuchinjikwa-chikuva chekusimudzira kweGUI muPython.
Chinhu chakakosha kwazvo cheiyo chirongwa ndeye kushandiswa kweakawanda kuverenga uye kuburitsa mashandiro kuGPU kukurumidza kupa. Chinangwa chakakosha chekuumba vhezheni 1.0.0 kudzikamisa iyo API. Shanduko dzinotyora kuenderana dzinozopihwa mune yakasarudzika "yekuyedza" module.
Kuchengetedza kushanda kwepamusoro, mazhinji eKudaPyGui kodhi yakanyorwa muC ++ uchishandisa Raidhara ImGui raibhurari iyo yakagadzirirwa kugadzira graphical kunyorera muC ++ uye inopa chaiyo yakasarudzika yekushandisa modhi.
Iyo yekushandisa yakakodzerana zvese nekukurumidza kugadzira mapusa akareruka uye nekukudziridza yakaoma yakasarudzika maGUI emitambo, kwesainzi uye mainjiniya ekushandisa ayo anoda kukwirira kupindura uye kusangana.
Vagadziri vekushandisa vane API yakapusa uye seti yezvinhu zvechivanhu kunze kwebhokisi, senge mabhatani, anotsvedza, mabhatani eredhiyo, mamenu, mafomu ezvinyorwa, kuratidzwa kwemifananidzo, uye dzakasiyana nzira dzekugadzira dzezvinhu zvehwindo. Pamabasa epamberi, rutsigiro rwekuumbwa kwemachati, mairafu uye matafura anomira kunze.
Uyewo, seti yevanowona zviwanikwa, node yekubatanidza edhitaina, yekuongorora ganda uye zvinhu zvekupa zviripo Freehand yakakodzera kugadzira 2D mitambo. Kuita kuti kusimudzira kuve nyore, zvishandiso zvakati wandei zvinopihwa, zvinosanganisira dhigiger, kodhi mhariri, gwaro rinoona, uye mutariri wedanda.
Anodiwa PyGui anoshandisa iyo API isingabvumirwe maitiro ekushanda .
Yakachengetwa maitiro zvinoreva kuti raibhurari inotora pamusoro pechiitiko kuumba mabasa, nepo Pakarepo maitiro modhi yekupa inoitwa padivi revatengi uye raibhurari yemifananidzo inoshandiswa chete kune chekupedzisira kuburitsa, kureva iko kushanda nguva imwe neimwe painopa mirairo kudhirowa ese interface zvinhu zvekuumba inotevera yakagadzirira furemu.
AnodiwaPyGui haishandise mawijeti echinyakare anopiwa nesystem, asi inogadzira ayo mawijiti nekudana iwo maAPI emifananidzo OpenGL, OpenGL ES, Metal, uye DirectX 11, zvinoenderana neazvino sisitimu yekushandisa. Hwerengedzo yeanopfuura makumi manomwe akagadzirira-kushandisa-majeti anopiwa.
Mune vhezheni itsva zvinotaurwa kuti inofanira kunge iine hushoma huwandu hwemhosho kudanana nyangwe zvakadaro izvi hazviise mutemo kuti panogona kunge paine kukanganisa kwekudzokorora, seakawanda masisitimu epasi akagadziriswa zvachose kubva ku0.8 uye kuchine yakakosha regression kuyedza setup. Iko kukoshesa kwakanyanya kwekuburitswa uku kwaive kudzikamisa iyo API, yatakaita izvozvi. Nyaya dzazvino dzinoda kuongororwa zvakare kuti ibudiswe.
Pamusoro peizvi, nhamba hombe yemirairo mitsva yakawedzerwa kune chishandiso, pamwe neiyo module yekuyedza nyowani uye kunyanya nekubvisa mirairo dzakasiyana iyo yatove kushaya basa.
Mushandisi anofanira kugadzira Dear_PyGuicreate_context () mamiriro asati adaidza chero mutemo weDPG
dragPayload yakachinja drag_data inotumirwa kune zvinangwa mu drag_callback panzvimbo ye drop_callback
yakafambisa iyo logger uye madingindira kuDearPyGui_Ext
tafura mitsara yave kudiwa
kure bind_item_disabled_theme ()
kure bind_item_type_disabled_theme ()
kure bind_item_type_theme ()
Iye zvino mushandisi anofanira kugadzira, kugadzirisa uye kuratidza iyo yekutarisisa usati watanga dpg.
"Gadzira_viewport () -> setup_dearpygui () -> show_viewport () -> start_dearpygui ()"
add_theme_color () uye add_theme_style () inofanirwa kuziva maitiro ekuva theme_component
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezveDiwa PyGui kana iwe zvakare unoda kuziva maitiro ekuisa chishandiso pane yako system, unogona kuzviita kubva chinotevera chinongedzo.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo Inodiwa PyGui sosi kodhi yakagoverwa pasi peMIT rezinesi. Yakaziviswa rutsigiro rweLinux, Windows 10, uye macOS mapuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Anodiwa PyGui, iri nyore-kushandisa Python GUI fomati
KDE Plasma 5.23 inosvika iine shanduko zhinji uye ichipemberera yayo 25th gore
ROSA Nyowani 12 inosvika iine yakawanda yekuvandudzwa, shanduko uye nezvimwe